Iimpawu kunye nokhathalelo lweJava moss kwii-aquariums | Ngeentlanzi
Namhlanje siza kuthetha ngesityalo esisetyenziswa ngokubanzi kwii-aquariums. Ngu Java moss. Igama layo lenzululwazi ngu IVesicularia dubyana kwaye ubunzima bayo ekunyamekeleni buphantsi. Yeyosapho lweHypnaceae kwaye yinzalelwane yoMzantsi-mpuma weAsia.
Ukuba ufuna ukwazi zonke iimpawu kunye neemfuno zesityalo se-aquarium, le yiposti yakho 🙂
2 Iimfuno zokutyalwa kwakho
3 Java moss iimfuno
4 Ukuzaliswa kwakhona kweVesicularia dubyana
Esi sityalo sikhula kwimilambo ethe chu yetropiki IJava Sumatra, iBorneo kunye neziqithi ezikufutshane. Ikhetha ezona ndawo zinomthunzi kwaye inokuphila kubunzulu obahlukeneyo. Ihlala ibonakala kunxweme lwamachibi kunye nemisinga.
Ukuba ukukhula kwaso kufanelekile kwaye kukwimeko entle, esi sityalo siyakwazi ukufikelela kubungakanani kangangokuba sigubungele i-aquarium yonke. Ekuqaleni kunzima kuye ukukhula kancinci ngenxa yenkqubo yoqhelaniso. Nangona kunjalo, bakuba beqhele imeko ye-aquarium, inqanaba lokukhula kwabo liyakhawuleza.
Sisityalo sokugquma esinengqindilili kwaye sikhula ngohlobo lwemisonto. Zide kwaye zigqunywe ngamagqabi amancinci kakhulu ajongene nawo. Amagqabi adityanisiwe njengezikali kwaye ayadibana nezinye iziqu. Oku kwandisa ukuxinana kwesityalo kwaye kwenze ubunzima besiponji.
Olu lwakhiwo lukhethekileyo luyenza indawo efanelekileyo yokubekwa kunye nokuphuhliswa kwemibungu encinci yeentlobo ezininzi zeentlanzi. Amagqabi anayo ubungakanani obujikeleze i-1,5mm ububanzi kunye no-5mm ubude, emile ngendlela engaqhelekanga. Ngokubhekisele kumbala wayo, eyona ixhaphakileyo ukuyibona kukukhanya okanye luhlaza kakhulu. Amathoni amnyama athile anokubonwa, kodwa ayisiyonto iqhelekileyo leyo.
Iimfuno zokutyalwa kwakho
Ukuze esi sityalo sikhule phantsi kweemeko ezifanelekileyo, kufuneka kuhlangatyezwane nezinye iimfuno ngexesha lokutyala kwaso. Ayifuni ukuba ityalwe kwi-substrate. Bakhetha ukuphuhlisa kwizinto zokuhombisa ezibekwe kwi-aquariums. Ndiyabulela koku, isinika ithuba xa ukhetha i-substrate efanelekileyo. Ukucothula isityalo kufezekiswa ngokulula ngentambo yokuthunga. Isityalo "sinokuthungwa" kwizixhobo ze-aquarium.
Nje ukuba i-moss yeJava ityalwe, ekuhambeni kweentsuku iya kusasazeka kwinto ebimiswe kuyo. Sinokubona ukuvela kwesityalo ngokujonga ukuba into igqunyiwe ngokupheleleyo. Ukuba sifuna, singasithengela isityalo ukuze sifumane ubume obufanayo kwento ekuthethwa ngayo. Ukwenza oku sisebenzisa isikere okanye ngokuthe ngqo ngezandla zethu. Ukuba siyenza ngokuchanekileyo, unokuhombisa umtsalane.
Kwelinye icala, ukuba sifuna ukubeka isityalo ngqo emazantsi e-aquarium esinakho Sebenzisa amatye amancinci kwaye uwabambe kwi-substrate. Ngeli xesha kuyakufuneka "siyibophelele" ematyeni ukuze ibagubungele ngokupheleleyo.
Java moss iimfuno
Esi sityalo sidinga izinto ezithile ukuze ukukhula kwaso kube kokuchanekileyo. Eyokuqala kukukhanya. Kuba ikhetha umthunzi kwindawo yayo yendalo, ayizukuhluka apha. Ukhetha indawo ezinomthunzi okanye ngezibane ezingezizo ezisekwe kwimibhobho exhamla ifotosinthesisi. Ukuba isibane sigqithisile sinokwenzakalisa impilo yaso kwaye sibangele ulwelwe oluhlaza ukuba sikhule kuso kwaye sisiminxe.
I-morphology yayo ekhethekileyo ibolekisa kuhlaselo lwekhaphethi okanye ulwelwe olunobunzima ekunzima ukulilawula nokuphelisa. Kwimeko apho sinokuhlaselwa kwe-algae kuya kufuneka sibasuse ngaphambi kokuba barhaxe ubulembu bethu. Ukulungiselela le nto akufuneki usebenzise iimveliso zealgaecide, njengoko zinokuchaphazela ukukhula kobulembu ngokwabo. Into efanelekileyo kukususa ezona ndawo zichaphazelekayo ukuze ezinye zingosuleli.
Xa iintlanzi zizikhusela, zigcina ukungcola kwi-aquarium. Oku konakalisa umhombiso oveliswe bubulembu kunye nezityalo ngasemva. Ngapha koko, esi sityalo Kunzima ukulungisa ngokufunxa. Oku kungenxa yokuba uxinzelelo oluveliswe kukukhutshwa komaleko omdaka urhuqa imisonto yesityalo.
Ukuba ayithenwanga xa inkulu, ubume bayo obunjengomsonto bunokubangela ukuvaleka kwezihluzo. Ukwenza oku, eyona nto icetyiswayo kukuyithena ukuze bafumane ukumila kwento eyayithungelwe kuyo.
Ngokumalunga neemeko zamanzi, Udinga amaqondo obushushu aphakathi kwe-18 ukuya kuma-26 degrees. Ngale ndlela iyafana namaqondo obushushu ahlala kuwo kwindawo ahlala kuyo. Ukwazisa esi sityalo ngentlanzi, kuya kufuneka uthathele ingqalelo ukuba uluhlu lobushushu luyahambelana. I-pH yamanzi kufuneka ibe phakathi kuka-6,5 no-8 kunye nobunzima phakathi kwe-10 ukuya kwi-12.
Ukuzaliswa kwakhona IVesicularia dubyana
Ukuvelisa kwakhona esi sityalo, kusetyenziswa indlela yokusika okanye yokuvelisa kwakhona. Ukwenza oku, i-filaments ezimbalwa zahlulwe kubunzima obukhulu be-moss. Imele ukuba inkulu kwaye ikhule ngokwaneleyo ukuba inokuphinda ilinywe kwaye ikhule.
Inokuphinda ityalwe kwindawo enye okanye kwenye i-aquarium, kuxhomekeke kwisidingo. Ukusika kungabekwa ujikeleze into efana nesityalo esingumama okanye isanti kufutshane nelitye oza kulisebenzisa ukogquma. Kubalulekile ukuba amanzi apho kutyalwe khona angantsha, kodwa kufuneka ukuba abe ne-chlorine esezantsi. Ngaphandle koko inokufa kwiintsuku zokuqala emva kokuphinda kutyalwe kwakhona.
Ubulembu beJava Ikhula kakuhle kwiigobolondo zecoconut, iifosili kunye namatye e-volcanic. Oku kunokunika indawo yethu yokugcina amanzi kwi-tropical touch. Ukongeza, sisityalo sasemanzini esingaqhubeka nokukhula ngokuthatha iingcambu kwizinto ezivelayo.
Okokugqibela, incam yabo bafuna ukuba nesi sityalo kwii-aquariums zabo kukuba, nangona kulula ukuyinyamekela, inokwenza ukuba ulondolozo lwe-aquarium ngokubanzi lube nzima. Ukuba umtsha kwihlabathi lee-aquariums, kungcono ukusebenzisa izityalo zeplastiki kunye nokukhetha iintlanzi ngononophelo olulula. Nje ukuba ulawule ukhathalelo, ngoku ungaya kwazisa nge-moss Java
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Izityalo ze-Aquarium » IJava Moss
Ukuthengisa kukaLaura De sitsho
Phendula uLaura De Sales